Gonu no Lazan’i Koety ! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 2:35 GMT
Zavatra roa no nanjaka tao amin'ny tontolon'ny blaogy Koetiana tamin'ity herinandro ity. Ny rivodoza Gonu no voalohany, izay nikasika ny manodidina an'i Oman ary nahafatesana olona 50 tamin'ny fandalovany sy nampihizina ny indostrian'ny solika sy entona. Ny Faharoa
Namely an'i Oman i Gonu
Manome vaovao ankapobeny amintsika mikasika an'i Gonu ny Zdistric.
Izao no mitranga ao amin'ny Oseana Indiana ary hamely mafy an'i Oman ny fandalovany amin'ny Alakamisy, avy eo handeha ho ao amin'ny Golfa hankany Iràna. Mihoatra ny 260 KPH (72 m/s) ny rivotra ary izany no rivodoza mahery indrindra hamely ity faritra ity hatramin'ny 1945.
Miresaka mikasika ny làlany i Q ao amin'ny Kuwaitisim .
Efa naheno mikasika ilay rivodoza izay mahakasika an'i Oman amin'izao fotoana izao avokoa ny rehetra, rivodoza izay heverina fa handeha hianavaratra, any amin'ireo farintanin'i Arabia Saodita, ary avy eo mety ho any Koety. (Milaza ny Al Jazeera fa mankany amin'ny mianavaratra ho any Iràna ilay izy, tsy handalo ny Golfa, saingy mbola tsy misy milaza an'izany ankehitriny ny any an-kafa). Rivodoza kilasy faha-5 i Gonu ankehitriny, ny karazana rivodoza mahery indrindra.
Mitaraina mikasika ny fandrakofana ny vaovao i Hugs from Kuwait.
Ka mihevitra ve ianao ankehitriny fa handrakotra izany avy hatrany eo ny CNN sy ny BBC? Ehh, tsy manao izany izy ireo. Efa nikarokaroka tany amin'ireo fantsona haino aman-jery aho hatramin'ny halina ary tsy misy na inona na inona. Tena mahatezitra ahy mihitsy izany. Hampiseho sary mikasika ny Tafiodrivony any Etazonia tsy tapaka mandritra ny volana maro izy ireo (MBOLA malaza FOANA ny tafiodrivotra Katrina!) saingy rehefa tratry ny rivodoza mahafaty kokoa noho ny Tafiodrivotra isika, dia tena fotsiana tanteraka mihitsy.
Hatezerana Amin'ny Lahatsoratry ny Gazety Iray
Manaitra antsika mikasika ny lahatsoratra niseho tao amin'ny gazety Koetiana iray i CyberRowdy - manazava fa mety ”nandeha lavitra loatra” ilay mpanoratra.
Rehefa mamaky ity lahatsoratra ity, samy hihevitra avokoa ny rehetra fa toerana ratsy hiainana sy hiasana i Koety. Marina amin'ny lafiny manokana ny sasany amin'ireo zavamisy voalaza ao anatin'ilay lahatsoratra, fa ny sasany kosa dia tena diso tafahoatra loatra ary aparitaka be loatra noho ny tokony ho izy. Nampihomehy ahy ny sasany tamin'ireo teboka ireo….
Taorian'ny nandefasan'ny olona ilay gazety tamin'ny imailaka, nofoanana tao amin'ilay tranonkala ilay lahatsoratra ary naneho hevitra manoloana ireo fiampangana natao taminy ilay mpanoratra, izay nanosika ny blaogera iray hafa hamaly izany.
Namaly ny valinteny nataon'ny mpanoratra izany lahatsoratra izany i “K The Kuwaiti” taorian'ny nanafoanana izany tao amin'ny tranonkalan'ilay gazety.
Nanapa-kevitra ny hanala ilay lahatsoratra tao amin'ny tranonkalany ny The Kuwait Times, angamba y tena marina nanapa-kevitra ny hamaky azy tsara ilay mpanonta lahatsoratra tamin'ity indray mitoraka ity. Nanoratra valiny tao amin'ny Kuwait Times momba ilay tsikera tanaty tambajotra i Mona Al-Fuzai. Toa nahatsapana ny filàna hamaly ny ampahany sasany tamin'ny valinteniny aho, satria maro ireo zavatra tsy iombonako hevitra aminy (ankoatra ireo tsy fifanoheran-kevitra isankarazany) .
Zavatra Mahaliana Hafa Ao Koety
Manintona ny saintsika any amina tranga iray ho avy ao amin'ny Masoivohon'i Japana any Koety i Exzombie.
Hikarakara ny fifaninanana kabary japoney voalohany indrindra ao Koety ny Masoivohon'i Japana ao amin'ny Firenen'i Koety izay iarahany miasa amin'ny Foibe ho an'ny Tolotra Iombonana sy Fanabeazana Mitohy, Oniversiten'i Koety.
(H)anao ny kabariny amin'ny teny japoney ireo Koetiàna mianatra teny Japoney ao amin'ilay foibe
Manantena izahay fa ho tonga hankahery azy ireo ianao raha manana fotoana
Tonga manampy ary manazava hevitra diso maromaro mikasika ny zava-mitranga momba ireo fampidramambola ao Koety i Maze ao amin'ny “Maze of Thoughts”.
Satria mahafantatra ny maro aminareo fa miasa amin'ny banky aho. Ny fanontaniana tokana henoko avy amin'ny mpanjifa tato ho ato dia ny hoe ”Hampihena ny zanabola amin'ny fampindramambola ve ry zareo?” ” Henoko fa toa averina amin'ireo mpanjifa araka ny fanapahankevitry ny banky foibe ny fiantohana ireo fampindramambola”…Tena leo be an'ireo fanontaniana ireo aho raha ny marina, satria ny zava-mitranga, dia mipetraka fotsiny ao amin'ny diwaniyas izy ireo ary mihaino na tsy mahazo tsara ny zavatra voasoratra any anaty gazety na ny zavatra lazain'ny namany aminy.
Maneho hevitra amin'ny lahatsoratra itay tao amin'ny Times mikasika ny zavatra hanin'ny fianakaviana Koetiana antonony iray mandritra ny herinandro i Forzaq8 .
Tena vaovao kisendrasendra ity. Efa naheno mikasika (ilay) Fanadihadiana an-tSary karakarain'ny Times ”Inona no Hanin'izao Tontolo Izao” ny ankamaroan'ireo olona mamaky blaogy ao Koety. Mikasika ny fianakaviana Koetiana ny iray tamin'ireo sary ireo.